MW CMC Iyo Xafladii Degmada Cusub Ee Shabeeleey - Cakaara News
MW CMC Iyo Xafladii Degmada Cusub Ee Shabeeleey
jigjiga( Cakaaranews )Isniin 21ka March 2016, Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo ay weheliyaan masuuliyiin kamid ah hogaaminta sare ee xukuumada ayaa saaka ka qaybgalay Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay oo loogu dabaaldagayay degmada cusub ee koonfurta jigjiga xarunteeduna tahay Shabeeleey taasoo kamid ah 25 kii degmo, 2dii MM iyo 2dii Gobol ee dhawaan baarlamaanka DDSI uu ku ansixiyay kalafadhigiisii ugu danbeeyay.
Xafladan ayaa waxaa kasoo qaybgalay dhamaan bulshada qaybaheeda kaladuwan sida dhalinyarada, odayaasha, cuqaasha, waxgaradka, culimo-awdiinka, hooyooyinka iyo waliba qaar kamida kooxaha fanka iyo suugaanta DDSI.
Hadaba Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar oo si diiran loogu soo dhaweeyay xaflada dabaaldaga degmada cusub ayaa khudbad muhiim ah oo taabanaysa dhinacyo badan kajeediyay goobtaas isagoo ugu horayn shacabka deegaanka guud ahaan ugu hanbalyeey degmooyinka, Maamul-magaalooyinka iyo gobolada cusub ee u soo kordhay deegaanka gaar ahaana shacabka degmada koonfurta jigjiga ee Shabeeleey. waxuuna siqodo dheer uga hadlay ahmiyada ay uleeyihiin deegaanka ansixinta 25ka degmo,2 maamul magaalo iyo 2da gobol ee cusub isagoo sheegay in ay kaqayb qaadanayaan horumarka deegaanka ee sida xawliga ah ku socda. Iyada oo ansixinta degmooyinkan ay xukuumada kaduulayso baahida shacabka islamarkaana lagu salaynayay si bulshada kafog goobaha adeeg-bixinta loo dhaweeyo goobihii ay adeeg kahelilahaayeen iyo waliba magaalaynta goobaha miyiga ah.
Dhinaca kale madaxwaynaha ayaa tilmaamay in degmadan cusubi ku caankutahay wax soosaarka beeraha islamarkaana shacabka ree shabeeleey qaran-joog iyo qurba-joogba ay soo maalgashadan dhanka magaalaynta iyo waliba dhanka waxsoosaarka.
Sidookale waxaa xaflada iyana dhinacooda kahadlay suldaamo,ugaasyo iyo cuqaal iyadoo kooxaha fanka iyo suugaantuna ay soo bandhigeen heeso iyo dhaantooyin katurjumaya taariikhda degmada cusub ee shabeeleey.
Si kastaba ha ahaatee, madaxwaynuha ayaa waxuu dhagax dhigay dugsi sare oo loo dhisayo degmada shabeeleey
Ugudanbayna,madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo masuuliyiintii wahelinaysay ayaa soo indho indheeyay bandhig lagu soo bandhigayay khayraadka ay caanka ku tahay degmada koonfurta-jigjiga ee shabeeleey